Wada hadal miyaa u socda Puntland iyo Somaliland? – Radio Daljir
Wada hadal miyaa u socda Puntland iyo Somaliland?
Juunyo 13, 2018 12:08 g 0
Wasiirka Warfaafinta, Isgaarsiinta, Hidaha iyo Dhaqanka Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo maanta saxaafadda kula hadlayay magaalada Garoowe ee caasumadda Puntland ayaa waxaa uu kusoo qaaday hadal kasoo baxay wasiirka arimaha dibadda ee Somaliland oo ku saabsan inay wada hadalo kula jiraan Puntland.
Wasiir Qarjab ayaa sheegay inuu socon wax wada hadal ah oo ay kula jiraan Somaliland, isagoona hadalka wasiirka arimaha dibadda ee Somaliland ku tilmaamay mid uu ku doonayo inuu shacabka been uu ugu sheegayo.
Wasiirka ayaa sheegay dadka kasoo jeeda deegaamada Somaliland iyo guud ahaanba Soomaaliya inay xor u yihiin oo dhulkooda yahay ayna ku ganacsan karaan maadaama ay yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed.
Ra’iisul Wasaare Khayre oo Dawladda Jabuuti uga Mahad-celiyay Tababarka Ciidamada Soomaaliyeed (sawiro)